Gubashada cyclone ee Biocomb - Kinne Maskinteknik AB
Gubashada Shidaalka adag ee dabacsanaanta gubashada saliida.
Gubashada Dabaysha ee Biocomb, shidaal adag wuxuu ku gubtaa olol sidii midka gubashada saliida. Waxyaabaha dabaysha dabiiciga ah ee loo yaqaan 'biocomb cyclone' waxay ku beddeli karaan kuwa gubanaya saliida aaladaha jira. Bedelaada saliida iyo shidaalka adag waxay dhacdaa iyadoo lagu xiro gubida dabaysha meesha ay ku jirtay saliida gubatay. Sida gubashada saliida, gubashada dabaysha ayaa si buuxda otomaatig u leh bilawga iyo joojinta isku xigxiga. Aag sharciyeyn ah oo ilaa 20% ah awoodda suuqa ayaa bixiya howlgal dhaqaale iyo dabacsan. Gubashada dabaysha waxaa lagu ridi karaa shidaal adag oo nooc kasta leh, tusaale ahaan caws, dhadday, alwaax alwaax iyo peat sidoo kale qashinka beeraha, warshadaha iyo qashinka guryaha. Shuruud looga baahan yahay shidaal in la isticmaalo waa in ay sambabada ku socoto oo lagu qaadi karo taas oo lagu gaari karo in la gooyo, la burburiyo ama la duugo sheyga. Qaar ka mid ah diyaarinta shidaalka ayaa la sameyn karaa iyadoo qayb ka ah maamulka shidaalka ee warshadda.
Gubashada wuxuu ku bilaabmaa saliid. Kadibna shidaal adag ayaa si isdaba joog ah loogu afuufayaa qolka gubida silsiladdu. Xilliga gubashada, dambaska waxaa lagu meeleeyaa dhinaca dambe ee qolka gubashada, halkaas oo si tartiib tartiib tartiib ah u dambas ah dambaska dambaska loo mariyo darbiyada oo loo adeegsado tuubbooyinka halkaasna lagu mariyo habka qufulka iyo gambaleelka weelasha weelka.
Haddii sabab kasta ha noqotee la joojiyo bixinta shidaalka adag, howlgalka saliida si toos ah ayaa loogu shidaa si loo hubiyo in tamarta la siiyo macaamiisha. Tani waxay xaqiijineysaa helitaan aad u sareeya. Gubashada ayaa ah mid aad u adag marka loo eego awooda mugga sare taas oo lagu helo hawo / shidaal isku dhafan oo aad u wanaagsan. Tani, oo ay weheliso luminta kuleylka yar ee deegaanka, waxay siisaa kuleylka gubashada sare iyo hufnaanta gubashada.
Dhisme adag oo leh qaybo dhaqaaqa oo kooban.
Qaabka gubashada Cyclone iyo shaqadiisa
Qalabka gubashada ee duufaantu waxay ka kooban tahay bir. Gudaha, qolka gubashada ayaa looga baahan yahay dhoobada, gogolka dhagaxa ah iyo hoolka ciyaarta iyo banaanka oo leh cimilo yar yar. Tayada dhoobada ayaa la waafajinayaa shuruudaha jira marka la gubayo shidaalka.
Hawo gubashada waxaa loo qabtaa furka dibedda ee gubashada iyo xaddiga hawada waxaa lagu habeeya tuubbooyin ku yaal aagagga ku teedsan. Tani waxay keenaysaa xawaare sare hawada iyo jahwareer xoog leh. Qaabka qiiqa gubashadu wuxuu siinayaa gubashada hawo dhaqdhaqaaq isu rogrogaysa dhamaadka iyo bannaanka dhexe ee gubashada.
Nooca biofuel-ka waxaa lagu ridayaa gubida qolka gubashada. Gelida shidaalka waxaa loo habeeyaa si isdaba joog ah shidaalkana waxaa lagu quudiyaa hawada gubashada ee wareega
dhaqaaqa dhanka dambe ee gadaal. Wareegga wuxuu ka dhigan yahay in walxaha shidaalku ay ku jiraan haraaga illaa laga adkaanayo. Qiyaasta qaadashadu waa sax oo had iyo jeer waxay u dhigantaa socodka hawada gubashada.
Bilaabida otomaatiga ee gubashada duufaantu waxay dhacdaa iyada oo lagu bilaabayo gubida saliidaha gubanaysa awooda 70 kW iyo wixii ka dambeeya 5
Daqiiqado dib u soo celinta matoorka batroolka ayaa la bilaabay, kaasoo si guul leh ugu kordhinaya tamarta 50% ee awooda qiimeeyaha. Ka dib 5 daqiiqo oo kale oo ah saliid gadaal ah, quudinta biofuel ayaa la bilaabay. Qulqulka biofuel-ka ayaa la kordhiyaa maaddaama socodka dib-u-soo-noqoshada saliida dib loo dhigo illaa ay gabi ahaanba joogsato ka dibna qulqulka biofuel-ka waxaa xakameeya awoodda loo baahan yahay.
Inta lagu jiro gubashada, dambas ayaa si isdaba joog ah loogu shubaa qaybta dambe ee qolka gubashada. Halkan laga bilaabo, dambas waxaa lagu xoqay si tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiibpụ 'ah loogu buufiyay oo dambas looga buuxay. Nidaamka qufulka, dambasku waxay ku dhacaan qubeyska biyaha. Laga soo bilaabo tan, oo u shaqeysa sidii dabin biyo ah, dambaska waxaa lagu qaadaa iyadoo lagu qaadayo qaanso lagu qaado weelka dambaska.
Naqshad gaar ah u ah dhaqaalaha tamarta wanaagsan.
Sida ugu habboon, gubashada digaagga iyo waliba shidaalka "ka yar", nooca biofuels wuxuu soo saaraa gaasas ololaya oo ay ku jiraan kaarboon-dioxide iyo biyo ay ku badan yihiin hawo-mareenka.
Isku-darka budada-biofuels, ka duwan gubashada shidaalka shidaalka, ma beddeleyso kaarboon-dioxide-jawiga jawiga maadaama ay dhirku nuugaan kaarboon-oksaydh-ka oksijiin oksijiin ah muddada ay korayaan. Gubashada lafteeda ayaa ah geedi socod aad u adag oo dhowr jeer oo isdaba joog ah falcelinno isdaba joog ah lagu xakameeyo xaaladaha dibadda iyo gudaha.
Marka la gubayo, walxaha shidaalka qaada ayaa sida caadiga ah u socda marxaladaha soo socda; uumi-biyoodka qaybaha firfircoon / gaasaska iyo gubidda haraaga kaarboonka. Taasi waa, shidaalka waxaa loo beddelaa gaasaska guban kara kaasoo si dheeri ah ula falgala oksijiinka kaarboon dioxide iyo biyaha. Waxqabadkaani waxay u baahan yihiin waqti, heerkul iyo helitaan oksijiin.
Codsiyada farsamo ahaan, qayb cayiman oo kaarboon oksaydh ah iyo sidoo kale hydrocarbon ayaa laga helaa gaasaska gaaska. Kaarboon moono-oksaydhka ku jira gaasaska dabku waa khasaare, maadaama ay kujirto tamar. Kaarboon oksaydhka waxay ku jawaabtaa jawiga si ay u gaarto kaarboon-dioxide.
Khasaaraha ka sokow, hydrocarbons-ka ayaa waxyeelo u leh aadanaha. Guud ahaan, tani waxay quseysaa saamiga kaas oo ah polycar hydrobonsons gaar ahaan poly aromatic.
Gubashada noolaha (biocomb burner) waxay bixisaa hydrocarbon dayacan iyo heerarka kaarboon-dioxide oo aad u hooseeya ee gaasaska ku jira xirmooyinka qulqulaya mahadsanid heerkulka sare, isku-darka hawada / shidaalka oo wanaagsan iyo waqtiga deganaanshaha oo ku filan.
Heer-kulka gubashada waxay kuxirantahay qiimaha kuleylka iyo qoyaanka shidaalka, heerkulka hawada gubashada iyo hawada xad-dhaafka ah, iyo sidoo kale xaddiga tamarta laga saaray ololka iyadoo la adeegsanayo shucaac iyo gudbinta. Gubashada noolaha 'Biocomb burner' wuxuu gaaraa heer kul gubasho sare iyadoo ay ugu wacan tahay hawada oo yaraatay iyo khasaarooyin yaryar.
Xaqiiqda ah inay jirto hawo-hawleed hawada dhexdeeda iyo ilaa xad cayiman oo shidaalka ah waxay suurtogal ka dhigaysaa samaynta oxygen oxides. Heerka xasaasiga ah ee nafaqeeyayaalka ah ee loo yaqaan 'nitric oxide bond' waxay ku kordheysaa heerkulka kordhaya iyo hawo korodhka. Nitric oxide waxyaabaha ku jira waxay kordheysaa iyadoo la kordhinayo waqtiga degenaanshaha. Nitric oxide waxay khiyaaneeysaa aashitada ciidda iyo dhimashada duurka. Heer-kulka gubashada marka la gubo biofuels-ka leh qoyaanka caadiga ah waxay u eg tahay in heerka samayska haaykolku uu hooseeyo. Gubashada noolaha (biocomb burner) waxay siisaa qiiqa hawo-yarida oksijiin yar iyadoo ay ugu wacan tahay hawo xad dhaaf ah iyo hawo / shidaal isku darka. Gubashada noolaha waxaa kale oo ay bixisaa qiiqa hawo-mareenka ah ee hawo-yarida ah xitaa shidaalka oo bixiya heerkul gubasho oo sareysa iyadoo ay ugu wacan tahay fursadda sahlan ee ay si hufan ugu soo bandhigeyso gaaska dilaaca.
Shidaalka adag badankood waxaa loo adeegsan karaa gubashada biocomb. Xaaladda ayaa ah in cabirka walxaha ay u oggolaaneyso qaadasho joogto ah iyo qaadista pneumatic. Adoo ku ridaya xarkaha ama gogosha warshadda, tan waxaa lagula kulmi karaa nooc kasta oo shidaal ah. Warshad, shidaal noocyo kala duwan ah ayaa la istcimaali karaa ka dib qiyaasta si fudud loogu habeeyay iyo baahida dhabta ah ee hawadu u leedahay shidaalka ayaa lagu quudiyaa nidaamka xakamaynta.
Dhammaan noocyada shidaalka adag waxay leeyihiin dambas. Heerkulka ay dambasku u gawracayaan way ka duwan tahay kan shidaalka ilaa shidaalka sidoo kale waxay kuxiran tahay halka shidaalka ku koray. Gubashada biocombku waa mid aan ka taxadirin dhammaan noocyada ash. Waxay sidoo kale leedahay xaddiga kala-baxa dambas iyo qayb aad u hooseeya oo aan kala-baxa lahayn oo dambas ah. Qaddarka yar ee dambaska ah ee ka tagaya gubashada sidii ashreyga duulaya ayaa sida caadiga ah ka kooban wax aan la gooynin.
Beddelka iyo rakibidda cusub
Naqshadeynta computerada gubta biocomb-ka, heerkeeda sare ee kala-baxa ashka iyo gubashada saliida ololka u eg ayaa si aad ah ugu habboon u beddelaya kuleyliyaha shidaalka lagu beddeley shidaal adag.
Iyada oo la siinayo qayb ka mid ah qalabka kuleylinta shooladaha turjulayaasadaha, tani waxay xitaa ku siin kartaa awood wax soo saar la mid ah tan saliida. Rakibaado cusub, kululeeyeyaasha caadiga ah ee loogu talagalay gubashada saliida ayaa loo isticmaali karaa, taas oo keenta qarashyada maalgashiga oo hooseeya.
Automation-ka iyo xakamaynta ayaa loogu talagalay qaab si isku mid ah ula qabashada fudud ee sida saliida gubashada loogu helo. Intaa waxaa sii dheer, tani waxay siineysaa gubashada Biocomb xakameyn u dhexeysa ilaa 20% xoogga sumadda. Qaddarka yar ee shidaalka ku jira gubashada uma baahna qalabka gubashada ama qaboojinta deg-degga ah.
Biocomb burner wuxuu leeyahay dhisme fudud oo adag oo leh qaybo yar oo dhaqaaqa. Qalabka kale ee wadarta rakibaadda waa tiknoolajiyad la yaqaan, oo si fiican loo xaqiijiyay, oo bixisa xarun fudud oo la isku halleyn karo oo leh kharash yar oo maalgashi iyo dayactir, halka isku halaynta hawlgalka ay aad u sarreyso. Awoodda si fudud loogu isticmaali karo noocyada kala duwan ee shidaalka ee Biocomb burner oo ay weheliso faa'iidooyin kale waxay siineysaa qiime dhammaystiran oo cusub xagga wax soo saarka tamarta - dhaqaale tamar wanaagsan.
Gubashada dabaysha tooska ah ee ku habboon shidaalka adag ee dhammaan noocyada: caws la jarjaray, caws la qariyey, miro goynta, keegga, dhagaxleyda, dhagaxleyda, qashinka, qashinka, qashinka warshadaha.
Sheekada ka dambaysa gubashada.
Meesha la adeegsan karo ee gubida dabaysha
Gubashada noolaha 'Biocomb burner' waxaa lagu dulsaarayaa kuleyl saddex-jibaaran oo toosan oo loogu talagalay soo saaridda biyo kulul, biyo kulul ama uumi.
Gubashada noolaha 'Biocomb burner' waxaa lagu rakibay qol isku-darka si loogu soo saaro gaasaska kuleylka kulul ee loogu talagalay ujeedooyin kala duwan oo qalajinta.
Gubashada biocomb-ka oo lagu dhejiyay gaaska gaaska kululeeyaha / hawada si loogu kululeeyo ama loo qalajiyo.